ICON, ụlọ ọrụ obibi akwụkwọ 3D na Akụkọ Ọhụrụ, ga-ewu ụlọ maka El Salvador | Akụkọ akụrụngwa
Teknụzụ mbipụta 3D na-aga n'ihu n'ụzọ ya n'agbanyeghị na ugbu a enweghị ọtụtụ ọrụ ma ọ bụ akụkọ na-egosi na netwọkụ ahụ, n'ihi akụkụ nke ọkọlọtọ ya. Taa, anyị maara akụkọ na-atọ ụtọ n'ezie gbasara imepụta "ihe" na 3D, na nke a nke nnukwu ihe dịka ụlọ.
Ma ọ bụ na n'etiti ụlọ ọrụ ICON na-arụpụta ndị na-ebi akwụkwọ 3D na Akụkọ Ọhụrụ na ọ bụ nzukọ jisiri ike gbanwee ndụ ọtụtụ puku mmadụ na Latin America site na usoro onyinye nke ọma, ga-ewu ụlọ nwere mbipụta 3D n'otu obodo na El Salvador, n’ihe na-erughị awa 24 na ihe na-erughị $ 4.000 n’otu n’otu.
Nke a bụ vidiyo nkwalite maka ọrụ a nke gosipụtara eziokwu nke mba ụfọdụ banyere iwu ụlọ, ọ kachasị mma ile vidiyo ahụ:
Na-agbakwụnye na nke a abụghị nkà na ụzụ ọhụrụ ma ọlị, ma n'ime ya anyị na-ahụ iji ọgụgụ isi jiri ya. Na ngwa nbipute Vulcan 3D, A na-ewu ụlọ n'ime ihe na-erughị awa 24 maka ndị ahụ chọrọ ya n'ezie ma nwee olile anya inwe ihe dị ka ụlọ ọhụrụ 100 site na afọ a 2018. Nsogbu bụ ego nke ụlọ ndị a na nke a kwekọrọ na mkpọsa onyinye emere maka Akụkọ ohuru.
Na nkenke, ihe a na-achọ bụ ndị na-etinye ego na-etinye aka na nhọrọ owuwu ọhụrụ a, ndị na-emezi ngwanrọ na ngwaike dị mkpa maka iwu na onyinye iji kwalite igwe dị mkpa na mpaghara ebe a ga-ewu ụlọ ndị a. Malite na ihe niile a na-efu ego ma a ga-agbakwunye ya na ụlọ ndị ahụ gafere asambodo dị mma megide ala ọma jijiji nwere ike ime yana iwu mpaghara ndị ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » ICON, ụlọ ọrụ obibi akwụkwọ 3D na Akụkọ Ọhụrụ, ga-ewu ụlọ maka El Salvador
Tụkwasa Ikuku Sịlị EVO, keyboard na òké nwere igodo nkịtị